Information on incontinence in Burmese | Continence Foundation of Australia
မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ ဆီး/ဝမ်း မထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ဆီး/ဝမ်း မထိန်းနိုင်မှုဟာ ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံမျိုးစုံရှိကြတဲ့ လူတွေအားလုံးကို ထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့လည်း၊ အဲ့ဒါက မူမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းကောင်းကတော့ ဆီး/ဝမ်း မထိန်းနိုင်မှုကို ကုသပေးနိုင်ပြီး အခြေအနေအများစုမှာ အပျောက် ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစာမျက်နှာအပေါ်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဆီးနဲ့ ဝမ်းဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင် ပိုမိုနားလည်သိရှိရေးကို အထောက်အကူပြုဖို့ မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ သိကောင်းစရာအချက်အလက်တွေကို သင် တွေ့ရှိရလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စာစောင်တွေကို သင့်ဘာသာစကားနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို နားထောင်ဖို့ ပိုပြီးနှစ်သက်ရင်၊ အသံခလုတ်တွေကို နှိပ်ပါ။
Incontinence is the unwanted and involuntary leakage of urine or faeces. It affects people from all cultures and it is not normal. The good news is incontinence can be treated, and in many cases cured. On this page you'll find information translated in Burmese to help you learn more about healthy bladder and bowel habits. Fact sheets are translated in your language. If you would prefer to listen to the information, click on the audio buttons.
"ဆီး/ဝမ်း မထိန်းနိုင်မှုဟာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်စရာ ပြဿနာတ
စ်ရပ်နိုင်ပေမယ့်၊ သြစတြေးလျားမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ လူ ၄ ယောက်
မှာ ၁ ယောက်က ဒါကို ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ သင် တစ်ယောက်
တည်းမဟုတ်ပါ။ အကူအညီရနိုင်ပါတယ်။ သင့် ဆရာဝန်နဲ့ စ
ကားပြောပါ ဒါမှမဟုတ် National Continence Helpline (တစ်ပြ
ည်လုံးဆိုင်ရာ ဆီး/ဝမ်း ထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ ကူညီရေးဖုန်းလိုင်း)
၁၈၀၀ ၃၃ ၀၀ ၆၆ ကိုဆက်ပါ။"
တစ်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ဆီး/ဝမ်း ထိ
၁၈၀၀ ၃၃ ၀၀ ၆၆
တကယ်လို့ သင့်မှာ အင်္ဂလိပ်
၁၃၁ ၄၅၀ မှာ ဆက်ခေါ်လို့ရတဲ့ တ
ပုပြီး ကူညီရေးဖုန်းလိုင်းကို ဆက်
သွယ်ပါ။ သူတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့
၁၈၀၀ ၃၃ ၀၀ ၆၆ နံပါတ်ကို ပြောပြ
ယခုဘဲ ၁၃၁ ၄၅၀ ကို ဆက်ခေါ်ပါ
အများသုံး အိမ်သာများ လမ်းညွှန်မြေပုံ